ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူးအတွက် ဘယ်သူအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပြီး ရော်နယ်ဒိုအပေါ် ဝေဖန်နေသူတွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် - xyznews.co
ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူးအတွက် ဘယ်သူအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပြီး ရော်နယ်ဒိုအပေါ် ဝေဖန်နေသူတွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ်
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ရာထူး အတွက် အင်တာ မီလန် နည်းပြဟောင်း အန်တိုနီယို ကွန်တီက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက်တို့ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ်မှာ လီဗာပူး အသင်းကို5ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက် ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား အထုတ်ခံရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေက စပါး ၊ အတ္တလန္တာ ၊ မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ ပွဲစဥ်တွေကို ဆက်လက်် ကိုင်တွယ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
ဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့ ဒီပွဲတွေမှာ ရလဒ်ကောင်း ယူပြနိုင်မှသာ အသင်းကို ဆက်လက် ကိုင်တွယ်ခွင့် ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် ကတော့ သူဟာ ဆိုးလ်ရှား အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ အပြည့်အဝ မယုံကြည်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက် ပါတယ် ။
” ခင်ဗျားဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ယူမလဲ ? ကျွန်တော် အတွက််တော့ အန်တိုနီယို ကွန်တီက အကောင်းဆုံး အံဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ တွန်းအားပေးဖို့ လိုနေတဲ့သူ တစ်ဦး ၊ နှစ်ဦးကို ဖိအားပေးနိုင်လို့ ပါပဲ “
” သူတို့ ဘယ်အချိန် ကောင်းကောင်း မကစားနိုင်လဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ် ။ အခုအချိန် အဲ့တာက ပြသနာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ကစားသမားတွေ အကောင်းဆုံး လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သေချာအောင် ညွှန်ကြားပေးရပါ့မယ် ။ ဒါပေမဲ့ အိုလီဆီမှာ အဲ့လို အရည်အသွေးမျိုး မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ် “
” အကယ်လို့ ခင်ဗျားရဲ့ အသင်းက5–0နဲ့ ရှုံးသွားခဲ့ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ နည်းပြတိုင်း ဖိအားတွေ ခံစားရမှာပါပဲ ။ အရိုးသားဆုံး ပြောရရင် ဆိုးလ်ရှားဟာ ယူနိုက်တက် နည််းပြ ရာထူးနဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ အပြည့်အဝ မယုံခဲ့ပါဘူး “
” သူက အလုပ်ကို Ok ဖြစ်ရုံမျှသာ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ ကိုင်တွယ်နေတာက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းလေ ။ ခင်ဗျားက အသင်းကို ကိုင်တွယ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးလူကို အလိုရှိနေမှာပါပဲ ။ အိုလီက အဲ့ဒီလို နည်းပြမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် လုံးဝ မတွေးထားပါဘူး “
” ကျွန်တော် သူ့အပေါ် လေးစားသမှု အများကြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားဟာ အကောင်းဆုံးကိုပဲ လိုချင်တာလေ ။ ယူနိုက်တက် အသင်းက ဆုဖလားတွေကို ရရှိချင်တဲ့ အသင်းမျိုးပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကစားသမားတွေဖက်က နည်းပြအပေါ် လေးစားသမှု ထားရှိဖို့တော့ လိုပါတယ် “
” အခုတော့ သူနဲ့ ယှဥ်နေရတဲ့ နည်းပြတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ၊ ဒီရာထူးကို ဘယ်လိုမျိုး ရခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်… အသင်းမှာ အကောင်းဆုံး ရှိနေဖို့ လိုနေတာပါ ။ သူကတော့ ယူနိုက်တက်ကို ရှေ့ဆက်ပေးနိုင်မယ့်သူ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မယုံပါဘူး ” လို့ ပြောလိုက်ပြီး ရော်နယ်ဒို အပေါ် ဝေဖန်နေသူတွေကို…
” ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ် တုန်းကတော့ ကျွန်တော်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အချို့ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ အကြောင််းပြချက် အချို့နဲ့ အတူ လူတွေက ရော်နယ်ဒိုကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ သူဟာ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး မကြိုးစားဘူး ၊ ဖိအားပေး မကစားဘူး ဆိုတာမျိုး တွေ့ခဲ့ရပါတယ် “
” အဲ့ဒီလူတွေကို ပြန်မေးချင်ပါတယ် ၊ ရော်နယ်ဒို မရှိရင် ၊ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ မရှိရင် ယူနိုက်တက် အသင်းက အဆင့် ဘယ်လောက်မှာ ရှိနေမလဲ ? စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေမှာပါပဲ ။ ရော်နယ်ဒိုဟာ စွမ်းနိုင်သမျှ ပေးဆပ်ကစားခဲ့သူ တစ်ဦးပါ ။ သူဟာ winner တစ်ဦးပါပဲ “
” အခုလို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အချို့ဝေဖန်မှုတွေက သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်စေဘူးလို့ ကျွန်တော် ခံစားရပါတယ် ။ အခုတော့ သူဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဝေဖန်ခံရသူ ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ” လို့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် က သုံးသပ်ပြောကြား သွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
Previous Article မက်ဆီ တယောက် ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ . . . လီဂူး မှာ ၅ ပွဲအထိ ဂိုးမသွင်းနိုင်သေးတဲ့ မက်ဆီ